Izincwadi zika-Elena Ferrante: i-super sales pseudonym | Izincwadi Zezindaba
Izincwadi zika-Elena Ferrante
U-Elena Ferrante igama elingelona iqiniso lombhali wase-Italy osekuyiminyaka ecishe ibe amashumi amabili ejabulisa indawo yemibhalo yomhlaba wonke. Yize eqale umsebenzi wakhe wokubhala ngeminyaka yawo-90s, umsebenzi wakhe wakhula ngo-2012 ngemuva kokushicilela. Umngani omkhulu, inoveli okwaqala ngayo i-tetralogy Abangani ababili. Ngo-2018, ngemuva kokuphumelela kwe-saga, i-HBO yayivumelanisa ne-TV ngegama lencwadi yokuqala futhi kuze kube manje izinkathi ezi-2 sezisakaziwe.
Njengoba cishe iminyaka engama-20 endaweni yemibhalo, umbhali unekhathalogi yamanoveli ayisishiyagalolunye, indaba yezingane kanye nendatshana. Ukungaziwa kwakhe akuzange kumvimbe ekunqobeni inqwaba yabafundi e-Italy nasemhlabeni wonke. Inoveli yakhe yakamuva, Impilo yamanga yabantu abadala (2020), ibhalwe ngu Isikhathi njengenye yezincwadi eziyi-100 ezihamba phambili zonyaka.
1 Izincwadi zika-Elena Ferrante
1.1 I-L'amore annoying (1992)
1.2 I-Figlia emnyama (2006)
1.3 I-L'amica geniale (2011)
1.4 I-Storia della bambina perduta (2014)
1.5 I-La Vita bugiarda degli Adulti (2019)
2 Mayelana nomlobi, u-Elena Ferrante
2.1 U-Anita Raja, "umbhali" ngemuva kuka-Elena Ferrante
Ngiphatheke kabi (1992)
Yincwadi yokuqala yombhali wase-Italy, ayinikezela kunina. Yanyatheliswa eSpain negama Uthando olucasulayo (1996), ehunyushwe nguJuana Bignozzi. Yinoveli esethwe eNaples maphakathi nekhulu lama-XNUMX, inezahluko ezingu-26 futhi ixoxwa ngomuntu wokuqala. Emakhasini ayo ubudlelwano phakathi kukamama nendodakazi yakhe buhlobene - u-Amalia noDelia—.
NgoMeyi 23, kutholwa isidumbu sintanta olwandle, ngemuva kokuhlonza isidumbu kwaqinisekiswa ukuthi yi-Amalia. Lezi zindaba ezibuhlungu zifika ezindlebeni zikaDelia ngosuku lwakhe lokuzalwa nje. Ukuthi unina wavela eshonile kwakuyinto ayengayilindele kangako ngalolo suku.
Ngemva kwale nhlekelele, UDelia unquma ukubuyela eNaples yangakubo ukuze ayophenya ngomcimbi, njengoba wayemangele ukuthi u-Amalia wayegqoke ubhodisi kuphela. Lapho efika edolobheni, akulula ngaye ukuba abhekane nesikhathi esidlule azama kanzima ukukushalazela, lobo buntwana obuyinkimbinkimbi ayenqume ukubuvala engqondweni yakhe.
Njengoba embula izimfihlakalo ezizungezile lowo muntu omubi, amaqiniso abawaqambayo ayavela imvelo yakho, impilo yakho kanye ubuntu bakho, ubuhlaza obuzokwenza ubone iqiniso elisha.
Indodakazi emnyama (2006)
Yinoveli yesithathu ye-literata. Yahunyushwa nguCelia Filipetto futhi yanyatheliswa ngeSpanishi ngesihloko Indodakazi emnyama (2011). Yindaba exoxwa kumuntu wokuqala ngomlingisi wayo oyinhloko, uLeda, kanye indikimba yakhe enkulu ingumama. Isakhiwo siseNaples futhi siveza izahluko ezimfushane ezingaphezu kuka-25.
ULeda ungowesifazane oneminyaka ecishe ibe ngu-50, udivosile futhi unamadodakazi amabili: UBianca noMarta. Uhlala eFlorence, futhi ngaphezu kokunakekela amantombazane akhe, usebenza njengothisha wezincwadi zesiNgisi. Impilo yakho evamile ishintsha ngokuzumayo uma inzalo yakhe inquma ukuthuthela eCanada noyise.
Inkulumo ka-Elena Ferrante
Owesifazane, akazizwa enesizungu, uyazibona khulula ukwenza okufunayo, ngakho uya eholidini eya eNaples yakubo.
Ngenkathi ephumule ogwini ukwabelana nemindeni eminingi yendawo, hlaziya, ngokungenhloso, esidlule. Ngaleso sikhathi, ehlaselwe izinto angaziwa ezifika ezinkumbulweni zakhe, yenza isinqumo esiyinkimbinkimbi nesiyingozi.
Umngani okhaliphile (2011)
Yinoveli yokuqala yesaga Abangane ababili. Inguqulo yayo yesiNtaliyane yanyatheliswa ngo-2011. Ngemva konyaka yahunyushwa ngesiSpanishi nguCelia Filipetto futhi yethulwa ngaphansi kwegama: Umngani omkhulu (2012). Isakhiwo silandiswa kumuntu wokuqala futhi senzeka eNaples ekhulwini elidlule. Kulesi senzakalo, ubungane buyisisekelo sendaba, futhi lokhu kunabantu ababili abasha njengabalingiswa abayinhloko: uLenù noLila.
U-Lenù no-Lila bachithe ubuntwana nobusha babo edolobheni lakubo, indawo embi kakhulu emaphethelweni eNaples. Amantombazane akhule ndawonye futhi ubudlelwano babo sebushintshile phakathi kobungani kanye nokubangisana okujwayelekile kuleyo minyaka. Bobabili amaphupho abo acacile, bayaqiniseka ukuthi bazozinqoba futhi baphume kuleyo ndawo emnyama. Ukuze ufeze izifiso zakho, imfundo izoba ukhiye.
Umngane omuhle (Ababili ...
Indaba ye-perduta bambina (2014)
Intombazane elahlekile (2014) -isihloko ngeSpanishi-umsebenzi oqeda i-tetralogy Abangane ababili. Indaba yenzeka ngekhulu lama-XNUMX eNaples futhi ihlanganisa u-Lenù no-Lila ebudaleni babo. Bobabili bathathe izindlela ezihlukene, okubenze baziqhelelanisa, kodwa indaba entsha ye-Lenù izobahlanganisa futhi. Indaba isuka osukwini lwamanje lwalaba besifazane ababili futhi yenza ukubheka emuva kwempilo yabo.
ULenù waba umlobi odumile, wathuthela eFlorence, washada futhi waba nezingane. Nokho, umshado wabo wabhidlika. Ngakolunye uhlangothi, uLila wayenekusasa elihlukile, akakwazanga ukushiya idolobhana lakubo futhi usazabalaza nokungalingani okukhona lapho. U-Lenù unquma ukuqala incwadi entsha futhi isihloko simenze wabuyela eNaples, okuzomvumela ukuthi ahlangane nomngane wakhe futhi..
Intombazane Elahlekile (Ababili ...
Ngemuva kokuphumelela kwesaga Abangani ababili, Elena Ferrante ethulwa Impilo yamanga yabantu abadala (2020). Yindaba eno-Giovanna njengomlingisi wayo futhi eyenzeka eNaples ngeminyaka yama-90s.. Le noveli inezici zomuntu siqu zikaFerrante, okwathi engxoxweni ehlangene wathi: “Ngesikhathi ngiseyingane ngangiqamba amanga kakhulu. Lapho ngineminyaka engu-14, ngemva kokuthotshiswa okuningi, nganquma ukukhula ”.
UGiovanna uyintombazane eneminyaka engu-12 que ungowonxiwankulu baseNeapolitan. Usuku olulodwa wezwa ngobaba wakhe - Ngaphandle kokwazi - ukuthi wayeyintombazane embi, njengo-anti wakhe uVittoria. Ehlabeke umxhwele futhi edidekile ngalokho ayekuzwa, wakwazi ukubona indlela abantu abadala abangabazenzisi nabaqambimanga ngayo. Engenwe ilukuluku, wanquma ukubheka lona wesifazane, ukuze azibonele mathupha ukuthi uyise wayekhuluma ngani.
Impilo yamanga ye ...
Mayelana nomlobi, u-Elena Ferrante
Ngenxa yokungaziwa kwakhe, imbalwa imininingwane yomlando womuntu eyaziwayo ngombhali wase-Italy. Abaningi bathi wazalelwa eNaples ngo-1946 futhi okwamanje uhlala eTurin. Kuwo wonke umsebenzi wakhe, waziwa kuphela ezingxoxweni ezimbalwa azinikeze ngama-imeyili.
U-Anita Raja, "umbhali" ngemuva kuka-Elena Ferrante
Ngo 2016, Owesifazane ogama lakhe lingu-Anita Raja "uqinisekisile" ngephrofayela ye-Twitter ukuthi uyena owadala leli gama mbumbulu.. Ngemiyalezo embalwa, lo muntu uvumile ukuthi "ungumbhali" futhi wacela ukuthi ubumfihlo bakhe buhlonishwe, wabe esesusa i-akhawunti. Kodwa-ke, ngemuva kwesikhashana uTommaso Debenedetti - ngokudabukisayo owaziwa ngokusabalalisa izingxoxo ezingelona iqiniso nosaziwayo - washo lawa ma-tweets, okwenza kube nokungabaza okwengeziwe.
UDebenedetti uqinisekise ukuthi uhlangane noRaja, nokuthi wamnikeza imininingwane. Naphezu komgudu ongabazisayo womlobi - ezibiza ngokuthi "I-Italian Champion of Lies" - ezinye izintatheli zaqinisekisa le mbono. Ukuze benze lokhu, babuze ukuthi imali ye-copyright yafakwa kuphi futhi yafakwa ku-akhawunti ka-Anita Raja, engaqinisekisa ukuthi nguye.
Indlela ephelele ye-athikili: Izincwadi Zamanje » Izinhlobo » I-Novela » Izincwadi zika-Elena Ferrante
Ukukhetha kwami ​​izincwadi zonyaka. Isibuyekezo